Vectors lacag la'aan ah: 29 bog oo aadan tabi karin | Abuurista khadka tooska ah
Sawirada Vector waxay leeyihiin astaamo dhowr ah oo ah iyaga ka dhig waxyaabaha ugu fiican ee loo isticmaali karo qaabeynta bogga, barnaamij ama qalab. Waxay noo ogolaadeen inaan kordhino cabirkooda iyadoon tayada la waayin, waana taas sababta ay muhiim ugu noqdeen dhamaan noocyada adeegsiga ee naqshadeynta websaydhka.
Mid baa jira taxanaha bogga internetka in Bixiyaan dhammaan noocyada dulinka bilaashka ah taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto bartaas dheer ee tayada ah naqshadeynta websaydhkaaga ama shaqo kasta oo ay tahay inaad u qabato macmiil, cidda ay doontaba ha noqotee.
5 Vector4 Free
9 sumadda siman
11 Snap2 walxaha
18 Khariidado Vector Bilaash ah
20 Noocyada Caalamka
22 Qaadada Sawirada
24 Qaboojiyayaal Qabow
26 Xaddid la'aan
27 Diiwaangelinta Vector Bilaash ah
28 Vector Bilaash ah
Waxay ka kooban tahay tiro aad u tiro badan oo noocyo sawirro ah, iyaga dhexdooda waxaan ka heli karnaa vector lacag la'aan ah. Waad awoodaa helitaanka tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah taas oo aad ku hubin karto tayada dhammaan waxyaabaha ay ka bixiyaan. Repertoire-keeda waa wanaaggeeda weyn, sidaa darteed maalmahaas waxaad dhammaystiri kartaa ururinta fallaadhayaasha si aad ugu hesho dalab badan macaamiisha aad la shaqeysid.
Xusuusnow taas markaa waxaad aadi doontaa lacag bixinta bil kasta inaad marin u hesho dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay, sidaa darteed 7-da maalmood waxay kuu oggolaaneysaa inaad go'aansato haddii ay mudan tahay in la bixiyo waxa aad ugu baahan tahay shaqadaada.
Una ee bixiya dulinka ugu weyn ee bilaashka ah ee loogu talagalay shaqsi ahaan iyo adeegsi ganacsi. Waxaa laga heli karaa qaababka AI iyo EPS labadaba, Freepik wuxuu bixiyaa suurtagalnimada helitaanka vectors-ka ugu caansan iyo kuwa hadda jira, iyo sidoo kale inuu aado mid ka mid ah liistada ballaaran ee qaybaha ay leedahay.
Hadda waxaad la yaabi doontaa meesha ay tahay khiyaamada lagu haysto in ka badan 260 kun oo dulinka shabakadan. Haddii aadan tagin goobta wax lagu iibsado, waa inaad amaah siisaa webka si aad ugu isticmaasho vektorka bilaashka ah ee aad ugu qaadatay xusuusta gudaha kombiyuutarkaaga. Soo jeedin xiiso leh oo ku saabsan shaqooyinka qaarkood gaar ahaan. Hadana haddii aad si joogto ah ugu baahatid vectors, waa dalab xiiso leh oo degelkan soo jeedinayo.
Kuwa kale ee shabakadaha heer sare ee vectors lacag la'aan ah oo horay loo yiqiinay VectorOpenStock. Waxaad heli doontaa kumanaan sawir gacmeedyo lacag la'aan ah oo si wanaagsan u abaabulan qaybaha.
Waxay leedahay sheeko yaab leh sida Tifatiraha khadka tooska ah ee internetka ayaa kuu oggolaanaya inaad habeyso naqshadaha vektorka Bog furaha, u habee qaabeynta oo ku dar waxyaabo cusub iyo ikhtiyaarka aad ku beddeli karto waxyaabaha sida midabka iyo qoraalka.
Kuwa kale font ku dhowaad aan dhamaadka lahayn kumanaan vectors lacag la'aan ah iyo dhamaan noocyada ay ka kooban yihiin sida ficillada, burushyada, font iyo sawirro. Waxyaabaha kale ee wanaagsanaanteeda ugu waawayn ayaa ah in sawiradeeda oo dhami ay xor u yihiin adeegsiga shaqsiga ah badidoodana loo isticmaali karo adeegsiga ganacsiga.
Marka, sidaad u dhihi lahayd, waxaad mar hore qaadaneysaa waqti aad ku booqato degelkan lagu sharraxay dhammaan noocyada mawduucyada ku habboon shaqooyinka ee naqshadeynta.
Sida kheyraadkii hore, Vector4Free ma lahan fiditaan balaaran oo ah vectors lacag la'aan ah. Iyagu waa halkii qiyaastii 1.500 oo si wanaagsan loo xushay oo tayo sare leh taas oo ka soocaysa websaydhyada kale ee u muuqda inay leeyihiin waxyaabo badan.
Mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee ay leedahay waa taas wax walba si fiican ayaa loo dalbadaa waxaadna ka raadin kartaa vector gaar ah ilbidhiqsiyo gudahood. Dhammaan sawirrada vector-ku waa u bilaash adeegsiga shakhsi ahaaneed, laakiin haddii aad rabto inaad u isticmaasho arrimo ganacsi, waa inaad timaaddaa oo aad hubisaa inay sidaas noqon karto.
Waxaan soo marnay degel u heellan guridda, oo hadda leh waxaa diiradda lagu saaray astaamaha sumadaha caanka ah ee in ka badan 9 kun iyo 3.000 astaamo kale oo summad leh. Goob aad u gaar ah oo lagu raadsado astaantaas oo loogu baahan yahay shaqo kasta oo khadka tooska ah laga helo.
Xusuusnow taas Waxaad ku haysaa qaab SVG, iyo sidoo kale JPG iyo PNG. Waxa kale oo ay ka dhigeysaa raadinta mid sahlan, sidaa darteed waxay leedahay wax walba oo ka mid noqon kara goobahaas gaarka ah.
Rabshadaha Adam Kwiatkowski waxay bixisaa 300 astaamo u gaar ah oo ku habboon dhammaan noocyada shaqooyinka barnaamijyada ama barnaamijyada. In kasta oo aanu ahayn liis ballaadhan oo dulqaadlayaasha bilaashka ah, haddana dhammaantood waa u lacag la'aan adeegsiga ganacsi iyo shaqsi ahaanba. Waxa kaliya ee aan loo isticmaali karin dib u iibintooda.
280.000 vectors bilaash ah waa xaddiga saxda ah ee ka kooban oo aad ka heli karto Vector.me. Sababta ugu weyn ee jiritaankeedu waxay tahay mashiin raadinta vektor lacag la'aan ah oo adeegsada aruurin aad u dhameystiran, oo laga heli karo raadinta. Qaybaha astaamaha iyo astaamaha ayaa gooni loo heli karaa.
Ka socda degelkan waxaan kuhadalnay waqti uun Creativos Online, iyo sida magaceeda ka muuqata, waxaa loo jiheeyaa isticmaale iyo naqshadeeye raadinta astaamaha dulinka. Xog keedkeedu wuxuu leeyahay dhammaan noocyada astaamaha bilaashka ah ee qaababka PNG, SVG, EPS, PSD iyo BASE 64. Mid ka mid ah xooggeeda waxaa laga helaa noocyadeeda kala duwan, sidaa darteed beddel ahaan inta ka hartay gelitaankaan, waxay ku guuleysataa tiro badan.
Degel kale oo loogu talagalay naqshadeeyaha doonaya wax weyn noocyo kaladuwan oo astaan ​​u gaar ah, sawirada vektorka iyo arrimo loogu talagalay webka Waxay bixisaa waxyaabo bilaash ah oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu u isticmaalo shakhsi ahaan iyo adeegsi ahaanba.
Es Waxaa lagugula talinayaa inaad aqriso shuruudaha shabakadda si gaar ah loogu isticmaalo vectors-ka bilaashka ah. Websaydh leh qaab gaar ah oo lagu daro kuwa ugu cadcad.
Qaabka baloogyada, Snap2objetcs wuxuu soo bandhigayaa taxane akhlaaq leh oo lagu qadariyo helitaanka dhammaan noocyada maaddooyinka waxa laga heli karo tilmaamaha waxa aan raadineyno, xirmooyin lacag la'aan ah. In kasta oo ay umuuqato inaan u baahannahay inaan ka dhex raadinno gelitaanka kala geddisan, websaydhkani wuxuu leeyahay tiro badan oo ah vektoryo bilaash ah oo aad adeegsan karto
Waxaan iftiimin karnaa inaan haysanno vectors-ka New York, Paris, London, Moscow iyo Tokyo. Wax aan sahlaneyn in la helo oo halkan ayaan ku heynaa.
Sida magaceedaba ka muuqata, kumanaan fallaadhayaal bilaash ah oo aad adigu iska leedahay hel sawiro, burush, gradients, font iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay leeyihiin hal abuur iyaga u gaar ah oo tayo sare leh, sidaa darteed, daqiiqado yar gudahood, waxaad ka heli kartaa vector-ka oo ay adkayd in la helo iyo in 1001FreeDownloads hubaal ay ku leedahay degelkeeda.
Way adag tahay in la kala saaro websaydhyada qaarkood oo leh magacyo isku mid ah, sida ugu hagaagsan ugu dhici kara FreeVectors.net, in kasta oo lagu kala soocayo beel ka mid ah dadka jecel vektor, waad ka sooci kartaa inta kale si aad si buuxda ugu aqoonsatid.
Dhawaan ayaa lagu daray vektorada meesha ugu sareysa, bilaash ah.
Un blog hal abuur leh oo uu hogaaminayo naqshadeeye Franz Jeitz Taasna, in kasta oo aysan lahayn xulashooyin badan oo ah dul-duulayaal bilaash ah, waxay leedahay xoogaa aad u soo jiidanaysa in lagu xisaabtamo. Tani waxay ka dhigan tahay in mid kasta oo ka mid ah vektorada aad ka hesho khasnado tayo sare leh, sidaa darteed waxaan kugula dar daarmaynaa liiskan inaad ku haysato qaar ka mid ah sawirada vektorka ugu wanaagsan shabakadda. Muhiim ayaan dhihi karnaa.
Una ka mid ah jaaliyadaha ugu waaweyn ee farshaxanka ee websaydhka oo si fiican loo yaqaan adduunka naqshadeynta. Websaydhkan waxaa ka buuxa waxyaabo bilaash ah iyo ilo tayo sare leh, in kasta oo mid ka mid ah wanaaggeeda ugu weyn ay tahay ballaadhinta ballaadhan ee repertoire-keeda, helitaanka wax gaar ahaan waxay noqon kartaa mid caajis ah.
La baar raadinta ayaa noqon doonta saaxiibkaaga ugu weyn si loo helo vector gaar ah. Waxa ugu fiican ayaa ah in yar oo sabar ah waxaad ka heli kartaa sawirro tayo sare leh.
Sidee dareen ahaan u noqon kartaa in lagu dhex maro dhexdeeda, tan Vectorportal, waa mid ka mid ah calaamadaha naga dhigaya inaan aragno in degelkan si wanaagsan loo qaabeeyey iyadoo diirada la saarayo naqshadaha vektorka ee bilaashka ah. Waxay leedahay miirayaal raadin waxayna leedahay ballaadhin ballaaran oo dhammaan noocyada farshaxanka ah, had iyo jeerna waxaa loola socdaa 'dulinka'.
Aynu diirada saarno taxanahan uruurinta vektorka yar yar ee lagu raadinayo bilowga taas oo fursad u siin doonta awood u leh inuu abuuro khadadka Sawirka CS6. Taas macnaheedu waa inay noqonayso shay.
Websaydhkani wuxuu ku kala duwan yahay inta badan liiskan, meelaha qaarkood waxaad u mari doontaa sanduuqa, inkasta oo ay waliba leedahay bilaash.
Khariidado Vector Bilaash ah
Goob loogu talagalay khariidadaha dulinka oo lagu soo dejinayo bilaash, markaa waxay noqoneysaa meel aad u qaas ah. Hadday tahay waddamo, qaaradaha, ama adduunka oo dhan, Khariidadaha Vector-ka Bilaashka ahi waxay bixiyaan vektoorro aan lahayn goob kale.
Waxaan ku sii wadaynaa taxane ah degello internet oo loogu talagalay far qorista. FontSpace waxay leedahay vectors badan oo bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo kuwa loo isticmaali karo ujeeddo ganacsi iyada oo la dul dhigo tilmaamaha jiirka.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay a astaan ​​gaar ah oo shirkad ama adeegSida Google Plus iyo noocyada kale ee teknoolojiyadda, Noocyada Adduunku waa meesha ugu habboon ee laga heli karo. Waxaad ku haysataa qaraar aad u sareeya si ay ugu muuqdaan kuwa ugufiican websaydhkaaga internetka ama shaqo aad u qabato macaamiishaada
Degel gaar u ah noocyada dharka ee bilaashka ah, inbadan oo funaanado ah. Way fududahay marin u helida si aad u awoodo inaad kala soo baxdo sheybaaradaan saxda ah si aad ula midowdid naqshadaha aad sameysay
Waxaan u laabaneynaa waxa uu yahay balooggu, markan wuxuu ka yimid naqshadeeye Chris Spoone, oo lagu garto taxane wanaagsan oo vectors lacag la'aan ah. Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in waxaad ku dari laheyd RSS feed si aad uga feejignaato waxyaabaha soo galaya Taasi waxay ka soo jeeddaa balooggan loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo isticmaaleyaasha bilaabaya safarkooda adduunka naqshada.
Ma xaqiijin karno taas Dhammaan vectors-ka bilaashka ah ee aad heli doonto waxay noqon doonaan kuwo tayo sare leh, laakiin kani waa degel caan ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad 'xoogaa' quusinayso biyaha Vecteezy si aad u hesho vector aad xiiseyneyso inaad u keento mashruucaaga cusub. Dabcan, sida kalluumeysato wanaagsan, waxaad soo uruurin kartaa wax soocelin ah.
Shaqeeyaa halkii sida degel ay beel ka mid ah nashqadeeyayaasha ay ku muujiyaan aaladaha ay ku shaqeeyaan in laguugu hagaajiyo baraha kale ee aad kala soo bixi karto qaar. Marka waxaa si wanaagsan loo sheegay in dhammaan waxyaabaha aad ka heli doontaa ay yihiin bannaanka.
Waxaan mar kale ku wareeri karnaa degel kale oo 'vector' magaciisa ku jira. Waxay leedahay ururinta dulinka lacag bixinta, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay xoogaa si wanaagsan loo xushay oo bilaash ah. Waxaa lagu heli karaa qaabka EPS, waxaad si fudud ugu qasbanaan doontaa inaad sameysato koonto si aad u bilowdo soo degsashada iyo u adeegsiga shaqadaada.
Iyada oo naqshad layaableh jaleecada hore, StockUnlimited waxay bixisaa qadar wanaagsan oo ah sawirada dulinka. Waxay haysaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah waxa aan soo degsanayno wakhti kasta. Degel kale oo leh ilo aad u xiiso badan.
Diiwaangelinta Vector Bilaash ah
Waxay u taagan tahay ururinta ballaaran ee vectors lacag la'aan ah oo leh qalabka lagama maarmaanka u ah helitaanka kan aan raadineyno. Hayso miirayaasha kala duwan waxa midab, duluc, caan ama nooca faylka. Si ka duwan All-Silhouettes, kuma jirto xayeysiin, markaa waxaad si fudud ugu dhex mari kartaa webka.
Vector Bilaash ah
Guud ahaan waad heli doontaa ku saabsan 16.000 vectors lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah soo dejinta, sidaas darteed waxay u taagan tahay degel degel muhiim ah u ah muuqaallada noocan ah. Xulo qayb gaar ah waxaadna heli doontaa aruurinta aad rabto gacmahaaga ama gujinta jiirka.
Degel caan ah oo, in kasta oo ay ka kooban tahay dhammaan noocyada kheyraadka sida sawirrada ilo furan, sidoo kale waxay leedahay qayb dulinka bilaashka ah oo maskaxda lagu hayo. Waxay bixisaa dhammaan noocyada macluumaadka ee ku saabsan qaraarada, noocyada faylka iyo tirada soo dejinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 29-ka bog ee ugufiican ee lagu helo vektor lacag la'aan ah
Istuudiyaha naqshadeynta caanka ah ee caanka ah